दूर्जेय चेतना: June 2010
गरी खान देऊ:.. कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः
सिलसिलालाई केही हप्ता अगाडिबाट जोड्न खोजेँ मैले जब साथीहरुले हिमाल खबर पत्रिकाको एउटा समाचारसगैको फोटोलाई फेसबुकमा घकेल्नु भयो। कुरा ठीकै थियो, मेरो पनि साह्रै चित्त बुझ्यो र यसै क्रममा फेसबुकमै निकै साथीहरुको बिचार पनि पठ्न पाइयो। कुरा फोटोहरुकै हो फेरि पनि, फोटो सगै जीवन बोल्छ र केही भनी रहनु पर्दैन। हजारौ अवसरहरुको खोजीमा, कहिले आउने हो हाम्रो पालो भनेरे कुर्दा कुर्दै कहिले होला अवसरले हामीलाई खोज्ने? अझ भनौ कहिले होला हामीले अबसरको निर्माण गर्ने ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर निकै कठिन छ र यस्तो यथार्थ नियतिका बीच, हामी कहिलेसम्म अल्झने हो ? फरक फरक देखिने यी फोटोहरुलाई एकमुष्ट रुपमा हेर्दा कहिले होला हाम्रा भन्नेहरुलाई चेतना पलाउने जस्तो लाग्छ। दोष र गुन अनि दोषी र गुनीको बारेमा बहस गाह्रो होला किनकी यसमा मेरो पनि हात छ। जे होस यी तस्बिरहरुको प्रसङ्ग फरक छन् तर मूल मर्मले केही त पक्कै भन्छ.............
रोजगारीका लागि पालो कुरेर बस्दै गर्दा: राती १ बजे देशका महान मान्छेहरु न्यानो बिस्तरामा सुतेकै होलान् वा बियरसगै बिश्वकपको मज्जा लिदै होलान् तर रंगशाला बाहिर मेरो देश यसरी सुतिरहेको छ.....
आफू सगै हजारौ सपना भाच्यिएको मेरो देश.(यस फोटोको बारेमा अझै केही लेख्‍ने आटनै गर्दिन म)।।।
हजारौ सपनाहरु भाचिदै गर्दा पनि अझ केही गर्न सक्छौँ हामी, हामीलाई हाम्रै ठाँउमा “गरी खान देऊ”।
यस अन्तिम तस्बिरले अनेकौ प्रसङ्गसग अनेकौ अर्थ राख्छ र निकै सम्भावनाका साथ जोडेर हेर्न पक्कै सकिन्छ। यहाँ देश सुतेको छ भनौ भने, यहाँ जस्तो होहल्ला सायदै कहीँ कतै होला र यहाँ देश जाग्राम छ भनौ भने यहाँ जस्तो सन्नाटा कहीँ कतै सायदै होला। म पनि फेरि भन्छु, कर्म त प्रकृतिकै गुण हो.....मलाई पनि मेरै ठाउँमा........ गरी खान देऊ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ............सबैलाई चेतना भया।
Posted by दूर्जेय चेतना at 12:00 PM
म! मात्र म एक प्रणीत प्रतिनिधि पात्र
म र मेरो वरिपरी चलिरहेको समयको कुरा, स्टीफन हॉकिंगले सोचेंका र व्याख्या गरेको समय भन्दा पृथक!! मेरो लागि बिग बैंग सिन्द्दान्त त्यही दिनबाट सुरु भयो जब मैले यहा पाईला टेकेँ। सुन्यबादको कुरा हैन, यथार्थमा समयसँग जोडिएको म र मेरो समयको कुरा सायद कुनै खगोलिय संरचनासँग तुलना नगरेरै हेरेको राम्रो। जीवन बाच्नकै लागि र बचाउनकै लागि मेरो समय सुरु भयो जहाँ भोग्न र भोगाईनकै लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको थियो। सबैको लागि यस्तै जीवन-दर्शनपरक समयको सुरुवाती पलहरुको खोजीमा कयौं मान्छेहरुले आफूलाई युगीन बनाएँ वा कति बन्नेक्रममा पनि होलान। म आफैमा मेरा लागि युगपुरुष बन्न खोजेँ, बनेँ र रहेँ। मेरो चौधेरा भित्रको संसारमै बिग बैंग सिन्द्दान्तको सुरुवात भयो। सीमान्त समय र यसको परिधि भित्रै मैले समयको सुरुवात खोजेँ। सायद हॉकिंगले एकनास सबै खाले समयको ब्याख्या गरे होलान्, सबै समयलाई एक नजरले हेरेका होलान। कति मान्छेहरु यसमा सहमत होलान, कत्तीले यो सोच्न पनि सकेका छैनन्। मैले यो एकमुष्ट समयलाई निहाल्ने प्रयासनै गरिन तर यस उपर एकनासको नजर भने राख्दै आएँ। केही सिकेँ, केही सिक्ने प्रयास गरे र सबै एकमुष्ट समयलाई मेरो अनुकुल बनाउने प्रयास गरे। जीवन बाच्नु र चलाउनुको एउटा अटुट सम्बन्धलाई हॉकिंगको समयको ब्याख्याले एकमुष्ट ब्याख्या दिन्छ वा दिदैन त्यो बहसको बिषय हुन सक्छ तर मैले मेरो जीवन चालसगै लिनुपर्ने र काट्नुपर्ने समयलाई उनको नजरबाट हेर्ने प्रयासनै गरिन। पृथक पृथक समय र त्यस बीचको अनेकौ खण्डहरुलाई मैले त्यो ठूलो एकमुष्ट समयसगँ दाज्ने गरेको छैन। मात्र मेरो समयको सुरुवात सगै अनेकौ तयारीमा हिड्नु र योजनाकै सेरोफेरोमा नै केही समय गएको अनुभब भन्दा केही पनि गरिन।
“हेर न समय कस्तो चाडो गयो, हिजो मात्र लाग्छ बिहे गरेको है” मेरी श्रीमतीलाइ यसो भन्दैगर्दा समयले कोल्टे फेरेको अनुभव गरेकै हुँ। एक अर्थमा समयसँग उमेर, जोस, जाँगर, पाणीग्रहण र त्यस बीच उत्पन्न प्रणयभावको मिठो अनुभवसँग जोडेर हेरेकै पनि थिए। ओहो तपाईकी छोरी ठूली भईछन् भन्दा , प्रसवनमा छट्पटिरहेकी मेरी श्रीमतीको अनुहार, अहिले त्यही रुपमा याद नै छैन, भए पनि त्यो पिडाको समयलाई अहिलेको समयको कुनै कुरा सगँ दाजेँर हेर्नै मिल्दैन तर पनि बिल्कुल निरपेक्षय रुपमा अनुभवलाई एउटै समयको कालखण्डबाट अनुभव गर्न नसकेको अबस्थामा र त्यही घटनाक्रम दोहोर्‍याइ अनुभव गर्नु बाहेक समयले केही पनि याद गराउदो रहेनछ किनकी समय चलयमान छ र यसको अनेकौ भुमरीमा हरेकलाई धुम्नु नै छ।
त्यसैले जीवन अनकौ योजना र एउटा तयारीमात्र हो। बाबु आमाले गरेको जन्मको तयारी वा भनौ आमाको पेटमा जाईगोट बनाईए पछि सुरु भएको समय सगैं हामी यहाँ अनेकौ तयारीका साथ, एउटा कालखष्डमा गएर रोकिने तयारी गरिरहेका छौ तरपनि हॉकिंगको भीष्म समयको व्याख्याबाट चोईटाएर,चोरिरहेको वा अनुभब गरिरहेको समय हाम्रा लागि बास्तबिक उपाहारनै होला, किनकी समय फेरि पनि बिना योजना र तयारीका साथ चलिरहेकै छ। भौतिक तयारीहरु !! जो मेरो जीवनको योजनाबद्ध तयारी भित्र समयले व्याख्या नगर्ने सीमा भित्र पर्छन् तर पनि समयलाई सुरु गर्ने समयको परिभाषा कुन समयले दिन सक्छ र? मात्र एकसाथ हजारौ अवसरहरुको खोजीमा एकैनास समयलाई घोच्ने (क्लिक गर्ने)हरुको मात्र, म एक प्रणीत प्रतिनिधि पात्र हु,. सबैलाई चेतना भया............
Posted by दूर्जेय चेतना at 12:13 AM